Antonio Conte Oo Shaki Wayn Sii Galiyay Mustaqbalkiisa Stamford Bridge Isaga Oo Dabka Ku Sii Shiday Wararkii Bixitaankiisa Ka Hadlayay. - Laacib.net
Antonio Conte Oo Shaki Wayn Sii Galiyay Mustaqbalkiisa Stamford Bridge Isaga Oo Dabka Ku Sii Shiday Wararkii Bixitaankiisa Ka Hadlayay.
Tababaraha kooxda Chelsea ee Antonio Conte oo mugdi wayn sii galiyay mustaqbalkiisa Stamford Bridge isaga oo markii wax laga waydiiyay in uu baxayo ku jawaabay: “Wax walba waa suurtogal”. Wuxuuna macalinka ree Talyaani sii huriyay wararkii maalmihii ugu danbeeyay sheegayay in Conte uu dhamaadka xili ciyaareedkan ka baxayo Blues.
Sidii aanu wararkii hore idiinku soo gudbinay waxaa soo baxay warar sheegayay in maamulka Chelsea ay haddaba sii eeganayaan badalka Antonio Conte waxaana la soo qaaday magacyada Max Allegri oo hadda Juventus tababare u ah iyo macalinkii Barcelona ee Luis Enrique iyada oo waliba ay wararka qaar sheegayeen in Chelsea ay heshiis mabda’iyan ah la sii gaadhay Max Allegri.
Markii Conte la wadyiiyay wararka xanta suuqa ee sheegaya in uu dhamaadka xili ciyaareedkan ka baxayo Chelsea ayuu ku jawaabay: “Wax walba waa suurtogal. Aniga waxaa qandaraaskayga kooxda ka hadhsan hal sano oo kale, laakiin kubbada cagta wax walba waa suurtogal.
Conte ayaa hadalkiisa sii raaciyay: “Shaqadayadu waa mid aad u adag, sababtoo ah wax walba si deg deg ah ayay isku badali karaan. Sanad kale ayaa ka hadhsan heshiiskayga waxaana kooxda waajib ku ah in ay go’aan ka gaadhayo haddii ay iska kay dirayso. Shaqo wayn ayaanu halkan ka bilawnay, waxaad u baahan tahay waqti si aad shaqadaada horumar ugu samayso”.
Antonio Conte ayaa isaga oo markale shaki wayn sii abuuriya yidhi: “Kubbada cagtu waa wax aad u adag in aad sanado badan koox sii joogtaa gaar ahaan England ka hor intii ayna tababarayaal sanado badan soo maamulayeen kooxo, laakiin hadda marka aad England joogto waxay ku faraxsan yihiin in ay xili hore tababarayaasha caydhiyaan”.
Antonio Conte oo markan u muuqday in uu saxaafada xusuusinayo taariikhda iyo dhaqanka ay Chelsea u leedahay in ay tababarayaasha shaqada caydhin jirtay ayaa yidhi: “Waxaynu ka hadlaynaa sii joogtiaanka Chelea iyo taariikhda kooxda oo aad u cad, waa wax caadi ah in saxaafada looga hadlo Chelsea iyo tababaraha Chelsea”.
Hadalka Antonio Conte ayaa ah mid si cad u sii kordhin doona wararkii markii horeba laysla dhex marayay ee sheegayay in waqtiga Antonio Conte ee Chelsea uu ku soo idlaan doono dhamaadka xili ciyaareedkan isaga oo muujiyay sida ay xaaladu u adag tahay.